IAlgolia: UkuKhangela ngaphakathi kweXesha eliNgwe njengeNkonzo | Martech Zone
IAlgolia: UkuKhangela kwangaphakathi kweXesha eliPhakathi njengeNkonzo
NgoMvulo, Februwari 17, 2014 Douglas Karr
Ukwakha amandla akho okukhangela ngaphakathi atyebileyo, ixesha lokwenyani, kunye nokukhawuleza yiprojekthi. Yongeza kuyo ukukhangela kwejografi, imifanekiso, urhwebo kunye neselfowuni kwaye uphuhlisa iqonga lonke. Besithetha nje kumvelisi ngale ntsasa malunga namandla abo okukhangela kwaye into leyo ifuna ukubhengezwa ngakumbi kwindawo yabo.
Akukho sidingo sokuphucula eyakho - Algolia yinkonzo yokukhangela ebanjwe ngokupheleleyo, efumaneka njenge-REST API. API abaxhasi bafumaneka kuzo zonke izikhokelo eziphambili, amaqonga kunye neelwimi kunye nokuhanjiswa kwedatha phakathi kwabaxumi kunye API ikwifomathi yeJSON.
Ukwenza okuphezulu Amaxesha okuphendula ukuya kumaxesha angama-200 ngokukhawuleza kune-Elasticsearch, ukuya kuthi ga kuma-20,000 4 amaxesha ngokukhawuleza kune-SQLite FTSXNUMX. Isalathiso se-asynchronous ukuze abasebenzisi bakhangele kwimizuzwana yedatha emitsha emva kohlaziyo. Bakwabhengeza ifayile ye- API yokujonga imeko yesalathiso.
Nginx Ukuphunyezwa kwecala lika-Algolia kwicala elibhaliweyo kubhalwe ngokupheleleyo kwi-C ++ kwaye ibethelelwe njengemodyuli ngaphakathi kwe-Nginx yokusebenza kwe-HTTP ephezulu.
Dashboard Ujongano olunye lomzobo kuyo yonke imisebenzi, kubandakanya ukusetyenziswa, ukusebenza, useto, API iinkuni, API izitshixo kunye nokukhangela idatha.
Ukukhangela kwindawo yogcino lwedatha -Yilelwe ukukhangela iirekhodi, hayi amaphepha
Isisombululo esigqibeleleyo sedatha ye-SQL kunye neNoSQL, enendawo ebonakalayo yokuma kwe-algorithm eyenzelwe idatha eyakhiwe ngokwesiqhelo.
Iimpawu ezininzi -Wamkela iintlobo zezinto kunye nalo naliphi na inani leempawu oza kukhangela kuzo.
Khangela njengoko uchwetheza -Ngaphaya kokugqitywa okuzenzekelayo, abasebenzisi bafumana iziphumo zokukhangela ezihlaziyiweyo ngonobumba ngamnye abachwethezayo.
ukufaneleka -Umgangatho owenziwe ngokwezifiso kwaye ubala ngokucacileyo. Algolia ibonelela ngendlela elula yokuhlela iziphumo ngokuthandwa ngelixa ugcina ukubaluleka.
mobile -Yenzelwe iselfowuni… ngokukhawuleza, xolela typos kwaye uhlele iziphumo ngomgama we-geo.
Iilwimi -Khangela kulo naluphi na ulwimi olubhaliweyo. Umzekelo, ukukhangela usebenzisa isiTshayina esenziwe lula kunokufumana ukungqamana okuhambelana nesiTshayina sendabuko.
Ulungiso lweTypo - Algolia Uyayiqonda typos, kwanakwiileta ezimbalwa zokuqala, ukuze abasebenzisi bakho basenokufumana oko bakufunayo.
Ukuqaqambisa okuSmart -Gqamisa ukuba leliphi icandelo elihambelana nombuzo womsebenzisi, nokuba eli candelo kuphela oonobumba bokuqala begama kwaye liqulathe typos.
Ukujongana nexesha langempela -Injini yokukhangela ekukuphela kwayo yokucebisa iinkalo njengoko uchwetheza, ukuze abasebenzisi bafumane iziphumo emva kokubethwa kwesitshixo sokuqala.
Ukukhangela i-Geo - bonisa ukubetha ngomgama, okanye kuphela ezo zikufuphi, okanye kwindawo ethile. Hlanganisa nemibuzo ebhaliweyo kunye nayiphi na enye into yokukhangela.
Ukufumaneka okukhulu - a 99.99% I-SLA (isivumelwano senqanaba leenkonzo). Onke amangeniso edatha azalisekiswa ngokuzenzekelayo kwiiseva ezintathu ezahlukeneyo zokugqibela.
Abagcini beenkcukacha ezininzi -Gcina ixesha lokuphendula liphantsi ngokukhetha isiseko sedatha esikufutshane nabasebenzisi bakho.
Ukhuseleko lokuqala - API Izitshixo zithintela ukufikelela kwisalathiso esithile, kwaye usete umda njengowona mlinganiselo uphezulu wombuzo kwidilesi ye-IP, okanye ixesha lokuphelelwa kwesitshixo.
tags: algoliauphando lwangaphakathinginxkhangela njengenkonzoUphando lwezoPhando
Inyani eyiyo malunga neFanele yokuThengisa
Utshintsho kuhlahlo-lwabiwo mali lweNtengiso luka-2014